ह्वात्तै बढ्यो इसीडी, विद्या’लय कर्मचारी र लेखापालको तलब भत्ता ! कति पुग्यो ? – List Khabar
Home / प्रमुख समाचार / ह्वात्तै बढ्यो इसीडी, विद्या’लय कर्मचारी र लेखापालको तलब भत्ता ! कति पुग्यो ?
admin December 11, 2021 प्रमुख समाचार Leaveacomment 110 Views
प्रारम्भिक बालविकास सह’जकर्ता (इसीडी), विद्यालय सहयोगी कर्मचारी र लेखापालको तलब भत्ता वृद्धि भएको छ । रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाले प्रा’रम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी), विद्यालय सहयोगी कर्मचारी र लेखापालको तलब भत्ता वृद्धि गरेको हो।
मंगलबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले गत सा’उन १ गतेबाट लागु हुने गरी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बालविकास सहजकर्ता, कार्यालय सहयोगी र विद्यालय सहायक (लेखापाल), सामुदायिक अध्ययन केन्द्र सिकाइ सहजकर्ताको तलब वृद्धिको निर्णय गरेको हो ।
जस अनुसार संघीय सरकारले इसीडी शिक्षक र आ’धारभूत तहको विद्यालय सहयोगी कर्मचारीलाई दिएको आठ हजारमा गाउँपालिकाले सात हजार रूपैयाँ थप गरेर १५ हजार पु¥याएको छ । माध्यमिक तहमा कार्यरत विद्यालय सहयोगी कर्मचारीलाई संघीय सरकारले दिएको आठ हजारमा गाउँपालिकाले नौ हजार रूपैयाँ थप गरेर १७ हजार पु¥याएको छ ।
माध्यमिक विद्यालयको लेखा कर्मचारीलाई दिएको १३ ह’जार पाँच सयमा गाउँपालिकाले सात हजार नौ सय ८० रुपैंया थप गरेर २१ हजार चार सय ८० रुपैंया पुर्याएको छ । यस्तै माध्यमिक विद्यालय तहको कार्यालय सहयोगीको संघीय सरकारले दिएको आठ हजारमा नौ हजार थपेर १७ हजार पुर्या’ईएको छ । सामुदायिक अध्ययन केन्द्र सिकाइ सहजकर्तालाई संघीय सरकारले दिदैं आएको आठ हजारमा पालिकाले सात हजार थप गरेर १५ हजार पुर्याईएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा प्रारम्भिक बाल विकासका स्वयं’सेवक र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १५ हजार पुर्याउने उल्लेख भए अनुसार पालिकाले उक्त निर्णय गरेको हो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुन आउने रकमका ला’गि सरकारले बजेटमा ५ अर्ब ५५ करोड रुपैंया विनियोजन गरेको छ । सोही रकमबाट बढि हुन आउने रकम सम्बन्धि पालि’काले व्यहोर्नु पर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिएको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार उमाकुण्ड गाउँपालिकाले गाउँपालिका कोषबाट रकमको व्यवस्था गरेको हो ।
पालिका भित्र मावि तहको लेखापाल र कार्यालय सहयोगी ७७ ज’ना छन् । विद्यालय सहयोगी कर्मचारी ३८ जना, बालविकास सहजकर्ता २७ जना र सिकाइ सहजकर्ता चार जना रहेको पालिकाले जनाएको छ ।
Previous कलंकीबाट पक्राउ परेका यी दुई युवती जसले पुरुष देख्ने बित्तिकै यस्तो हर्कत गर्थे !
Next सरकारले देशभर धुमपान प्रतिबन्ध लगाउने तयारी